Manje abantu abaningi bakhathazeka kakhulu ngempilo yabo yingakho kokuqala kutsi bahlanganyele ezemidlalo. Kodwa ngenkathi nokugijima, ukuhamba ngebhayisikili, nokunye. D. Awufuni ulahlekelwa contact nabathandekayo babo, abangane, nengangibajwayele. Kuyefana nasendleleni ucingo esiphuthumayo emsebenzini noma isehlakalo esithile esingalindelekile, uma udinga ukubiza i-ambulensi noma enye into. Yingakho kungcono ukuthi ube mobile nabo, futhi kungaphazamisi (eqinisweni isihlalo sakhe ngokukhanyayo futhi ndawo), kungcono ukusebenzisa uma ezemidlalo yefoni ku isandla. Ngaphezu kwalokho, ne iselula uzokwazi ukudlala imidlalo umculo oyikhonzile, esizonika isimo oyifunayo.
Ezemidlalo Ucingo Case ususondele; zinhlobo
Ezimweni ezinjalo zingase zihluke kakhulu komunye nomunye, futhi uma ukhetha imodeli oyifunayo kuyodingeka acabangele izici eziningi, futhi izifiso zakho. Ezemidlalo Ucingo Case ngakwesokunene - lena inketho ethandwa kakhulu, kodwa hhayi kuphela. Isikhathi esining impela, obandayo yenziwa ukuze isikhwama kungenziwa igqoke hhayi kuphela ngesandla (esihlakaleni futhi ibhodi lemisindo), kodwa futhi ngezinyawo, uma umuntu esivumelana ngakho. izinhlelo ezahlukene ukuvumela ezizibeni ukuzivumelanisa nangaphansi intombazane mncane, kanti umuntu omdala wesilisa kwemisipha. Kodwa Esimweni esinjalo kufanele sitholakale. Ifoni kungabuye aboshelwe ngezindlela ezahlukene. Kukhona okuhlukile, okuyinto nje ezizibeni ezimbalwa futhi ephaketheni ezivamile, noma ingase uphawu njengoba kwaba njalo endabeni manzi, okuzoxoxwa kabanzi ngezansi.
Ngokuvamile, ezemidlalo icala yefoni yakho senziwa elinama evumela isikhumba ukuphefumula futhi ngesikhathi esifanayo ungaphuthelwa izithukuthuku esandleni somuntu ocingweni. Lokhu lapha uhlobo plus double. Amakhava kungenziwa eyenzelwe lolutsite kwefoni. Umbala nesitayela kwesembozo kungahluka kakhulu, kodwa ngokuvamile imodeli ezemidlalo akuyona brand imibala eziqinile. Ezemidlalo esandleni ukumboza Ifoni ngeke eqolo, nakuba, futhi, kuye ngokuthi inkampani noma lolutsite mobile, intengo zingahluka. Isikhathi esining impela, ecaleni, ngaphezu isikhala ifoni, kukhona ephaketheni ezengeziwe, okuyinto ekahle kakhulu ukubeka imali noma okhiye.
Manzi Ucingo Case
Kuyinto efanelekile ngalabo bantu surf, uzokwenzani-kayaking, ukuya ezintabeni noma kwezinye izindawo lapho ifoni zikwazi ukuthamela amanzi. Ngaphandle kweqiniso lokuthi indaba ka ikhava amanzi ngempela futhi akesabi ngisho ukujula, ifoni ungaqhubeka ukusebenza buthule. Ikesi ngeke ukuvikele ukulawula touch screen, eqinisweni, lokho akuphazamisi cishe izinga ukudluliswa umsindo uma ekhuluma. Enye inzuzo enkulu yalezi nesembozo wukuthi kukhona izindawo esikhethekile ifoni ikhamera ukuthi ungenza izithombe namavidiyo, ngisho nalapho amanzi. Izinga Case amavidyo has cishe awukho umphumela. Ukuze kube lula wokuyidlulisa unamathele ingalo noma entanyeni.
Shelf endlini yangasese: yini okumelwe siyibheke
Indlela ukukhetha humidifier ephathekayo. Ephathekayo humidifier ultrasonic
Izivakashi primus: yeziqondiso, amathiphu "wahlangabezana '
Gabadzhou - iresiphi ngezithombe
Imizila kusuka eMoscow kuya Togliatti
Okufanele ukwenze uma ungazi ukuthi yini okufanele uyenze? Indlela enze isinqumo esifanele?
Abantu abahamba ngezihlalo ezinamasondo Toscana "3 in 1": incazelo, izibuyekezo zamakhasimende